दम्पतीबीच धेरैजसो झगडा के निहुँमा हुन्छ ? जान्नुहोस् – List Khabar
Home / रोचक / दम्पतीबीच धेरैजसो झगडा के निहुँमा हुन्छ ? जान्नुहोस्
admin July 30, 2021 रोचक Leaveacomment 183 Views
दम्पतीबीच के निहुँमा झगडा पर्छ ? धेरै दम्पतीले यसबारे चासो राखेकै हुँदैनन्। अर्थात्, आफूहरूबीच हुने झगडाको कारण वा बिउ के हो ? उनीहरूले सायदै हेक्का राख्छन्। यद्यपि झगडा भने भइरहेकै हुन्छ। मनमुटाव भइरहेको हुन्छ। भनाभन भइरहेको हुन्छ। कति दिनसम्म बोलचाल बन्द भइरहेको हुन्छ। तर, दम्पतीले फर्केर सोच्दैनन् कि हामीबीच झगडा हुने मुख्य कुरा के हो ?
त्यसो त दम्पतीबीच हुने झगडामा दुई किसिमको प्रवृत्ति पाइन्छ। एक, कतिपय झगडा यस्ता हुन्छन्, जो भुसको आगो झैं भित्रभित्रै सल्कन्छ। त्यसले निकै भयानक रुप लिन्छ। दम्पतीबीच सानोतिनो निहुँमा भनाभन परिरहन्छ। एकअर्कामा अविश्वास र असहयोगको स्थिति हुन्छ। यसले परिवारमा कलह ल्याउँछ भने दम्पतीमा फाटो आउँछ।
दुई, अर्को पाटो पनि छ यसको । दम्पतीबीच हुने झगडाले कतिपय भ्रम, असमझदारीलाई मेट्छ । आफ्ना पार्टनरलाई के कुरामा चित्त बुझेको छैन वा बुझ्दैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। उनीहरू एकअर्कालाई चित्त नबुझेको कुरा खुलेर व्यक्त गर्छन्। यसले उनीहरूलाई एउटा समझदारीको विन्दुमा पुर्‍याउँछ। अतः यस किसिमको झगडाले दम्पतीबीचको सम्बन्ध अरू परिपक्क र बलियो हुँदै जान्छ।
दम्पतीले यदि कुनैपनि असमझदारी वा अविश्वास भए त्यसमा छलफल गर्न सक्छन्। हुन त रिसलाई नियन्त्रण गर्न कठिन छ, यद्यपि पारिवारिक सुखका लागि यो आवश्यक पनि छ। त्यसैले, धैर्यता र विनम्रता नै दम्पतीबीच हुने झगडाको ओखती हो।
Previous मानहानीमा २५ करोड भारु क्षतिपूर्ति माग्दै अदालत पुगिन् शिल्पा सेट्टी
Next छोरालाई कुटपिट गर्ने सौतेनी आमा पक्राउ